Iimpawu kunye nokuhlaba kwecaravel jellyfish. Kufuneka wenze ntoni xa urhawuzelelwa | Ngeentlanzi
Ihlabathi le-jellyfish ligcwele ukuthanda ukwazi kunye neentlobo ezintle ngokwenene. Emva kokujonga ngononophelo kunye nokuhlalutya jellyfish engafiyoNamhlanje singena ngokupheleleyo ngomnye umzekelo odumileyo kunye nomtsalane. Imalunga ne- ikharavani jellyfish. Kuyaziwa ngegama lamanzi amabi nangona ithathwa njengejellyfish engeyonyani. Ngokwenene yihydrozoa (inyoka yamanzi) kwaye ukuluma kuyingozi.
Kule nqaku siza kutyhila zonke iimfihlelo ze-caravel jellyfish esichaza ukuba ziziphi iimpawu zayo, indlela yokuphila kunye nento ekufuneka uyenzile xa olu hlobo lukuluma.
3 Ukutya kwecaravel jellyfish
5 Wenza ntoni ngokuhlaba kwecaravel jellyfish
Igama layo lenzululwazi ngu I-Physalia physalis. Luhlobo lwe-siphonophore hydrozoan oluvela kusapho lwePhysaliidae. Olunye lweempawu ezimele olu hlobo lwesilwanyana kukuba umzimba wakhe ngowokoloniyali hayi umntu ngamnye. Oko kukuthi, inomzimba owenziwe ngokudibana kwezinto ezininzi eziphilayo ezisebenzisanayo hayi ezomntu omnye. Yijellyfish ehamba kakuhle emanzini ashushu, ngenxa yoko sinokuyibona kufutshane nonxweme oluthile. Oku kwandisa ingozi yokulunywa ngabahlambi.
Iintsika zihlala zi-1 yemitha ubude, nangona iisampulu ezinokufikelela kwiimitha ezi-3 ubude zifunyenwe. Into eyenza ukuba ibe yingozi kukuba inento ehlabayo enakho ukukhubaza intlanzi enkulu. Oku kuthetha ukuba umntu olinywayo uza kuba neziphumo ezibi. Ngokubhekisele kwi-cnidarians, ine-cnidocytes. Ezi ziityhefu zazo ezinako ukutyhefa nabani na ofika phambi kwazo. Ityhefu yeprotini enokubangela ukuba amaxhoba akhe angalimali.
Ukuhlasela ixhoba, liyazisongela lize libabambise ngeentente zalo ezinde ezinobuthi. Elinye ilungu lomzimba walo lihamba phezu kolwandle, ngelixa elinye licwile emanzini lijonge izilwanyana ezinokubakho. Xa behamba bengamaqela amakhulu baziva bekhuselekile kunakwimimandla emincinci. Benza uluntu olukwaziyo ukufikelela phantse kwiisampulu eziliwaka, ngenxa yoko inyambalala yale jellyfish iyingozi.
Kukho iintlobo ezimbalwa kuphela ezingakhuselekanga kwityhefu yayo, njenge iklownfish nentlanzi yecaravel. Ezi azonakalisi xa zibanjwe phakathi kweentente zazo.
I-caravel jellyfish ayilunganga ngokudada emanzini abandayo, kodwa kwiindawo ezinemozulu yetropiki apho ubushushu bamanzi bushushu. Kwelinye icala, inokwenza kakuhle kwiindawo ezinemozulu epholileyo, kodwa mancinci amathuba okuba kubekho inani elikhulu leekopi ngokuqhubekayo.
Indawo apho uninzi lwabantu lujolise kuLwandlekazi lwePasifiki. Abantu abaninzi baye babonwa nakwezinye iindawo ezithile zeAtlantic kunye nezinye, kodwa zincinci kakhulu, kuLwandlekazi lwaseIndiya. Baye bafika eSpain kwaye sifumene iimeko ezininzi apho kubonwe kuLwandle lweMeditera. Siyazi ukuba oku kunokuba yingxaki kumhlambi. Ke ngoko, kamva, siza kubona ukuba masenze ntoni ngaphambi kokulunywa.
Ukutya kwecaravel jellyfish
Ukuze ikondle, le jellyfish ikhubaza ixhoba layo ngetyhefu eliyikhuphelayo kwaye iyitya ngesisu sayo. Batya i-zooplankton kunye ne-krill larvae. Jellyfish esele ikhulile inakho ukungenisa ii-shrimp, iimfene, oononkala, iintlanzi kunye namaqanda ezinye iintlobo. Ukuba ukutya kunqabile, bayakwazi ukutya enye i-jellyfish.
Ezi jellyfish azinamalungu okuphefumla okanye izixhobo. Ukuphefumla kwakhe akukho nzulu. Benza oku ngokusasazeka kwegesi phakathi kwamanzi kunye nomzimba wakho ngesikhumba. Ngombulelo kolu tshintshiselwano ngegesi olunokuthi luphefumle.
I-caravel jellyfish ineesini esahlukileyo, oko kukuthi, zine-dioecious. Ngexesha lokuzala kwabo, bahlala bekhulula isidoda kunye namaqanda emanzini.. Kulapho ukuchumisa kwenzeka khona. Kuyenzeka kwakhona ukuba isidoda sichumise amaqanda kwindawo engaphakathi yomzimba wejellyfish yabasetyhini.
Ngokwesiqhelo, kuxhomekeke kwimeko yendalo esingqongileyo kunye neempawu zayo, ixesha lokuphila kwale jellyfish liphantsi kakhulu. Bahlala befikelela kwiinyanga ezi-6 zobomi kuphela. Nangona bekude nonxweme, kukho imisinga yolwandle enokubarhuqela endaweni efanayo kwaye yenzakalise abahlambi.
Ezi jellyfish azingookumkani baselwandle, kodwa zikwanazo neentshaba zazo. Phakathi kwazo sifumana I-loggerhead turtle, i-hawksbill, i-sea slug, intlanzi yelanga nengubo ye-octopus. I-salmon kunye ne-swordfish ngamanye amaxesha ziyatya.
Wenza ntoni ngokuhlaba kwecaravel jellyfish
Ukulunywa kwale hydrozoan kubuhlungu kakhulu kwaye kude kube ngoku unyango olusebenzayo alukafumaneki. Okwangoku iyabekwa Zama ukunyanga ukuluma nge -78 degree yomkhenkce owomileyo. Kule meko, eyona ilungileyo kukuthintela. Kukho usetyenziso olubizwa ngokuba zii-infomedusas ezibonisa iimephu ngeyona frequency iphambili yejellyfish kunye noxinaniso lwabo. Ngale ndlela, kungcono ukuba ungahlambi okanye ube nokubek 'esweni ngcono amanzi esihlamba ngawo. Ukuba ubona enye, eyona nto intle ukuyenza ukuphuma emanzini kwaye ungayi ndawo.
Nangona abantu abaninzi besenza, Akuboniswanga ukusebenzisa iviniga, i-ammonia okanye umchamo kunyango lwe-jellyfish. Ukuba iintlungu azipheli emva kwesicelo samanzi olwandle nasemva kokususa iintambo, kungcono ukuba uye kugqirha ngokukhawuleza. Kufuneka kusoloko kukho izithuba zokugada elunxwemeni kunye nonyango olusisiseko. Ke ngoko, kungcono ukuya kuvavanyo olulungileyo.
Njengoko ubona, kukho izilwanyana eziyingozi kakhulu ebantwini. Nangona bengekho ngokwemvelo kunxweme, imisinga emininzi yolwandle iyabaphatha. Ukongeza, ngobushushu behlabathi, amanzi ebebanda ngaphambili ngoku ayanyamezeleka kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » I-jarafish yaseCaravel